डिजिटल सामग्री उत्पादन: अन्तिम उत्पादन के हो? | Martech Zone
बुधबार, सेप्टेम्बर 30, 2015 बुधबार, सेप्टेम्बर 30, 2015 Douglas Karr
तपाइँ कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ अन्त उत्पादन तपाईंको सामग्री उत्पादन को? म मार्केटर्सको डिजिटल सामग्री उत्पादनको धारणासँग संघर्ष गर्दै छु। यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन मैले सुन्न जारी राखेको छु:
हामी प्रति दिन कम्तिमा एउटा ब्लग पोष्ट उत्पादन गर्न चाहन्छौं।
हामी वार्षिक जैविक खोज मात्रा १ 15% ले वृद्धि गर्न चाहान्छौं।
हामी मासिक लीड २०% ले वृद्धि गर्न चाहान्छौं।
हामी यस वर्ष हाम्रो निम्न अनलाइन डबल गर्न चाहन्छौं।
यी प्रतिक्रियाहरू थोरै निराशाजनक छन् किनकि हरेक मेट्रिक एक हो सार्दा मेट्रिक माथिको प्रत्येक मेट्रिकको एक भोल्यूम, यससँग सम्बन्धित समयको लम्बाई, र मार्केटरको नियन्त्रणभन्दा बाहिर भ्यारीएबलमा अनियन्त्रित निर्भरता हुन्छ।
दैनिक ब्लग पोष्टहरू अन्त उत्पादको लागि बराबर हुन्छ, यो हो उत्पादकत्व। बढ्दो खोज मात्रा प्रतिस्पर्धा र खोज इञ्जिनको उपयोग र एल्गोरिदममा निर्भर छ। बढ्दो सीसा रूपान्तरण अनुकूलन, प्रस्ताव, प्रतिस्पर्धा र अन्य कारकहरूमा निर्भर गर्दछ - विशेष गरी सम्भाव्यता। र सामाजिक मिडियामा तपाईंको दर्शक अधिकार र सामग्री प्रमोट गर्ने तपाईंको क्षमता को सूचक हो, तर फेरि - यो मुख्य रूपमा अन्य भ्यारीएबलमा निर्भर गर्दछ।
म भन्दै छु कि यी मध्ये कुनै पनि मेट्रिक्स महत्त्वपूर्ण छैन। हामी ती सबैलाई मोनिटर गर्दछौं। तर के मँ भन्छु कि सामग्री विपणकहरूले BIG, HUGE, GIANT, OBVIOUS अन्त उत्पादन… हराइरहेका छन् भन्ने विश्वास गर्दछन् र त्यो सामग्रीको पूर्ण कागजात लाइब्रेरी विकास गर्दैछ।
के प्रति हप्ता पाँच ब्लग पोष्टहरू काम गर्दछन्? त्यो फ्रिक्वेन्सीमा निर्भर हुँदैन; यो सामग्रीमा अन्तर छ जुन तपाईं पहिले नै प्रकाशित गर्नुभएको छ र सामग्री जुन तपाईंको दर्शकले खोजिरहेका छन्।
तपाईंको सामग्री ल्यान्डस्केप के हो?
तपाइँको लक्षित श्रोतालाई अवलोकन गर्दै, के विषयहरू छन् - तपाइँको उद्योगको लागि विशिष्ट - जुन तपाइँ अख्तियार निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसमा सामग्री लेख्न सक्नुहुन्छ जसले तिनीहरूलाई उनीहरूको क्यारियर र व्यवसायमा सफल हुन मद्दत गर्दछ? तपाईंको साइट र सामग्री मार्केटि strategy रणनीति तपाईंको उत्पादहरू र सेवाहरूको बारेमा लेखेर अन्त हुँदैन ... जुन न्यूनतम हो। तपाइँको पाठकहरूको लागि एक मूल्यवान संसाधन बन्नु र उनीहरूको सफल हुन मद्दतको लागि विश्वास र अधिकार निर्माण गर्दै
के तपाईं कम गर्न र अप्टिमाइज गर्न सक्नुहुने सामग्रीको बहु उदाहरणहरू पहिचान गर्न आफ्नो साइटको अडिट पूरा गर्नुभयो, र तपाईंले आवश्यक नभएको बारेमा लेख्नुभएन भनेर सामग्रीमा खाली ठाउँहरू चिन्न सक्नुहुन्छ?
के तपाईंले रूपान्तरणमा सामग्रीको प्रभाव नाप्ने माध्यम लागू गर्नुभयो ताकि तपाईं आफ्नो हालको सामग्री र अनुसन्धान सुधार गर्न र बाँकी सामग्रीको विकासलाई प्राथमिकता दिन सक्नुहुन्छ?
म निश्चित छुईन कि तपाईं कसरी सम्भवतः सामग्री मार्केटिंग रणनीतिको सफलतालाई मापन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईं परिप्रेक्ष्यमा आदेश दिन चाहानु भएको ल्यान्डस्केपको पूर्ण विश्लेषण नगरी। लेख्नका लागि प्रति हप्ता पोष्टहरूको संख्या बुझ्न यो मद्दत गर्दैन जबसम्म तपाईंले कति पोस्टहरू प्राप्त गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्न। सायद तपाईले आफ्नो उद्योगमा खोजिरहनु भएको वृद्धिलाई कमाण्ड गर्न तपाईले प्रत्येक हप्तामा तीन पटक लेख्नुपर्दछ।
अन्तिम उत्पादनलाई परिभाषित नगरी तपाई कसरी योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ?
सादृश्यले दिनभर टायर पम्प गर्दै प्रोडक्शन असेंबली लाइन विकास गर्दै कारको निर्माण पूरा गर्ने आशा गर्दछ। माथिका केहि प्रश्नहरू दौड जित्ने बारे हो ... तर तपाईंसँग दौडिएको इञ्जिन प्राप्त गर्न पर्याप्त भागहरू पनि छैन!
कृपया यो नसोच्नुहोस् कि म यसलाई सरल पार्न खोज्दै छु। यो एक धेरै जटिल प्रक्रिया हो जुन वर्गीकरण, अनुकूलन र प्राथमिकता रणनीतिहरूको पहिचान गर्न एक टन अनुसन्धान लिन्छ न्यूनतम व्यवहार्य उत्पादन। यो असम्भव छैन, तर यो गाह्रो छ। जे होस्, एक पटक तपाईले अन्तिम उत्पादनको क्षेत्र चिन्नुभयो भने, तपाईले अधिक जानबूझिएको कार्य गर्न सुरू गर्न सक्नुहुनेछ र परिणामका केही अपेक्षाहरू विकास गर्न सक्नुहुनेछ।
टैग: सामग्री परिदृश्यसामग्री प्राथमिकतासामग्री उत्पादनडिजिटल सामग्री उत्पादन